JIIFTO: TUSAN - WardheerNews
W.T. Idiris M. Cali
Tixdani waxa ay la hadlaysaa qof kasta oo innaga mid ah oo ay daashatay tegnoolajiyadda casriga ahi, gaar ahaan adeegyada aynu ugu yeerno, “baraha bulshada.” Shaki ma leh in adeegyadani sida shilinta wakhtiga inooga jaqaan, waaba waxa loo samaystay!, misana iskama fujin karno oo waannu la qabsannay, halkaas oo aynu ku noqonnay guuldarraystayaal laga jil roonaaday. Waayo, siduu 1998-kii ku khudbeeyay Niil Boosman, guulaystayaashu waa dadka inoo soo hindisa agabka ay tegnoolajiyadda casriga ahi ku fusho.
Markaan u fiirsaday sida aynaan uga gaashaaman tegnoolajiyaddan seefta ah, waxaan tiriyay tixdan aan qoray 28-Abriil-2019. Markii hore si kaftan ah ayaan tixda ku bilaabay, oo waa waxa ay ugu dhex filiqsan yihiin ereyada la madoobeeyay ee Ingiriisiga ah oo aan islahaa ku tirakoob uun adeegyada “baraha bulshada,” balse markii dambe waxay soo baxday, sida ay ila tahay, tix dhabiiltan ah. Akhristayaasha ayaana qiimayn doona arrintaas iyo arrimaha kale ee ay tixdu marinayso. Waxay tiri:
Tix haddeer laguu lisay
Tusan loogu magac daray
Toobkaha ka buuxsoo
Tartiib shifo ku wada laac
Wixii tegay qof aan baran
Waxa taagan muu garan
Timaaddada u muu dhigan
Waxtar loogu tammadiyo
Haddii beri sankoo tolan
Tunka layska raran jiray
Qodxo teedsan awgood
Tirtirsiintu may harin
Is addoonsi lama tirin
Ee tadawur buu galay
Waxa too ka marag kacay
War bal eeg tiriiliyan
Aad taano ku lahayn
Toban kalena qaataan!
Waxa taas ka sii daran
Tin-tin bay xogtaadaba
U tusaan shirkado raba
Oo lacag u tuumiya
Saad ula tacaashana
Waa inaad ka tashataa
Oo aad ku tookhdaa:
“Maya! Tiwitar kuma lumo
Faysbuug tif kama dhuro
Warka tooxsigee yaal
Ee xumo tashiilka ah
Uma qaado taakaba
Tasaawiir iskama dhigo
Tigtog oo ciyaalnimo
Tamlar dhaamin maraxnimo
Aykankood ma tuujiyo
“Redhid kala takooroo
Taag laysu sheegtoo
Dadku kala toltolan yahay
Iyo geym ma toociyo
Tekis aan dan loo qorin
Amin tayo leh kuma dilo
Hadal aan tafniidnayn
Misna aan la tifaftirin
Kuma tuuro YuuTuub
“Markay tahay websayddana
Foorum aan tacliin iyo
Lagu tebinnin tii roon
Ma tusmaysto goornaba”
Gaar kuu tollaysani
Qoyskaaga taym siin
Aad kula tasbiixsato
Tartan orodna kula gasho
Qalinkaagu tiix noqon
Beertaad ku tacabtana
Markaasaad turxaan li’i
Ku tuntuunsan guulaha
Kuma lihi ha taabanin
Ama taablet yaabliyo
Teknolooji oo idil
Tilmaantaydu waa uun
Dhanka taban ka dhawrsoo
Dhanka togan ka dhaansuu
Adigoon tixgelin helin
Adoon taadu soconayn
Oo aan ka taajirin
Tegnolooji waa suus!